Qoraalkii NISA oo la sheegay in lagu "soo jiidanayo" dano shisheeye
Madasha Xisbiyadda Qaran ayaa soo bandhigay "ujeedooyinka" laga lahaa warbixintaas.
MUQDISHO, Soomaaliya – Madasha Xisbiyadda Qaran ee Soomaaliya ayaa caddeysay mowqifkeeda ku aadan qoraalkii NISA ku sheegtay in weerarkii Ex-kontarool Afgooye uu qorsheyntiisu lahaa dal shisheeye.
War-saxaafadeed ku qoran English oo kasoo baxay xisbiyadda mucaaradka ayaa bayaanka hay'adda sidoonka ku sifeeyay "mid lagu daboolayo xaqiiqadda dhabta ah ee is-miidaaminta".
Bayaankan uu warsidaha GO arkay ayaa "ujeedada" hadalka hay'adda ku qeexay "soo jiidashadda dano shisheeye oo ku lug leh loolanka juqraafi siyaasadeed ee ka socda Soomaaliya".
Warka qoraalka ah ayaanan lagu soo bandhigin magaca dhinacaas.
"Ujeedada labaad waa in si khiyaano ay ku jirto loo qaboojiyo carrada shacabka ka qaadey dhimashada, dhaawaca iyo burburka ka dhashay fashilka hay’adda ee ah in ay ururiso macluumaad sirdoon oo ka hortagi karay weerarkaas," ayay ku dartay warqadda oo ku taariikheysan 1-da January, 2019.
Qoraalka ayaa "ceeb" ku tilmaamay "ujeedooyinkaas ay xambaarsaneyd" warbixinta 'bilowga ah' hay'addu sheegtay in ay u gudbisay madaxda sarre ee dalka.
Madasha oo sheegtay "in ay ka xun tahay hab-dhaqankaas" ayaa ku waanisay Wasaaradda Amniga Soomaaliya in ay ka fogaato baahinta "warar marin habaabin iyo abuurista cadow aanan jirin".
30-kii December, 2019, NISA ayaa qaraxaas oo noqday midkii 3aad ee ugu dhimashadda badnaa taariikhda Soomaaliya la xiriirsay dal shisheeye saacado kadib markii wargeys Turki ah ku eedeeyay Imaaraadka.
Dhacdadaas oo dadka ku naf-waayey badankooda ay shacab yihiin ayaa dibadda u soo saarey jahwareerka hay'addaha dowladda Farmaajo maadaama madaxweyne Farmaajo si rasmi ah ugu eedeeyay Al-Shabaab.
Weerarkii Xabsiga Muqdisho: Maxaa suurtageliyey hubka la dusiyey?
Soomaliya 13.08.2020. 14:20
In ka batan tobban maxbuus oo ay ku jiraan saraakiil AlShabaab iyo Daacish ayaa ku dhintay shaqaaqadaas.
NISA: Weerarkii Ex-kontarool waxaa qorshayntiisa lahaa dal shisheeye
Soomaliya 30.12.2019. 13:49
Kaamirooyin DF ku rakibtay jidadka Muqdisho oo qarax lagu burburiyey
Soomaliya 30.01.2020. 07:21
Madaxii Amniyaatka Al-Shabaab ee gobolka Banaadir oo "is-casilay"
Soomaliya 13.02.2020. 13:20
NISA oo "qabatay" shabakad Al-Shabaab u qaabilsan qaraxyada
Soomaliya 29.01.2020. 20:20
Magacyada iyo sawiradda "Xubno Al-Shabaab ah" oo lagu raadjoogo
Soomaliya 01.01.2020. 07:56
DF Soomaaliya oo fahfaahisay heshiiska ay la gashay Mareykanka 27.09.2020. 20:40
Xil la wareegida ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya oo la duray 27.09.2020. 20:25